घैलाघारीमा स्टेशनरी र लत्ताकपडा वितरण | चितवन पोष्ट
गृह » घैलाघारीमा स्टेशनरी र लत्ताकपडा वितरण
घैलाघारीमा स्टेशनरी र लत्ताकपडा वितरण
जगतपुर । श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय घैलाघारी जगतपुरमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत करिब ५९ जना बालबालिकारुलाई स्टेशनरी र लत्ताकपडा वितरण गरिएको छ ।
नारायणी घर जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनको सहयोगमा स्टेशनरी तथा लत्ता कपडा वितरण गरिएको हो । वितरण गरिएको सामानहरुमा विद्यार्थीहरुको लागि जाडोमा आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, कापी कलम, रेजर, पेन्सिल लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरिएको छ । श्रीराष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय घैलाघारीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा क्षेत्र नं. ३ का प्रदेशसभा सदस्य रामलाल महतो प्रमुख अतिथि एवम् नारायणी घर जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि रहेका थिए ।
कार्यक्रममा नारायणी घरजग्गा तथा आवास व्यवसायीका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले आफू र आफ्नो संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा समस्यामा परेका विपन्न, गरिब समुदायहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको र अझ भविष्यका दिनमा पनि यस्तै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
विद्यालयका प्राचार्य लेखनाथ पौडेलले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रममा केरुङ्गा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका सन्तबहादुर तामाङ, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २३ का वडा अध्यक्ष नरिनारायण पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चितवन शाखाका उपमन्त्री विदुर केसी, लायन्स चेतनाथ वाग्लेलगायतले कार्यक्रमको बारेमा बोलेका थिए ।
भीमनगर विद्यालय ५८ औ वाषिकोत्सव सम्पन्न
अस्पताल कर्मचारी यूनियनको महाधिवेशन भोलिबाट